के हस्तमैथुन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ ? जानीराखौँ - Movies Trends
के हस्तमैथुन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ ? जानीराखौँ
किशोरावस्थामा हरेक व्यक्तिमा यौनका बिषयमा कौतुहलता हुन्छ र अशिकांश युवायुवतीलाई आफ्ना यौनांग चलाएर यौन सुख पनि प्राप्त गर्ने बानी (हस्तमैथुन) लागेको हुन्छ । हस्त परम्परागत मान्यतामा हस्तमैथुनलाई त्यति राम्रो मानिदैन ।
हस्तमैथुनलाई विभिन्न समस्याको प्रमुख कारणको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । तर वर्तमान समयमा आईपुग्दा विज्ञानले नै हस्तमैथुनका थुप्रै फाइदाहरु रहेको प्रमाणित गरिसकेको छ । जसले पुरातन सोच र मुल्य मान्यताहरुलाई परिवर्तन गरेको छ ।
हस्तमैथुनका क्रममा व्यक्तिको मुटुको धड्कन र श्वासप्रश्वास तीव्र हुन्छ, जसले गर्दा रक्तसञ्चार तीव्र हुन्छ भने मांसपेशी पनि क्रियाशील हुन्छ । यसकारण शरीरले मानसिक तथा शारिरीक तनावबाट छुटकारा पाउँछ । हस्तमैथुन स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ । वास्तवमा हस्तमैथुन स्वास्थ्यको लागि कसरी राम्रो हुन्छ, भन्ने विषयलाई यसरी चर्चा गरिएको छ ।
१-स्पर्म काउन्ट बढाउँछ
चिकित्सक द्वारा गरिएको विभिन्न सोधहरूका अनुसार, यो पत्ता लागेको छ कि स्खलनबाट स्पर्म काउन्टमा वृद्धि हुन्छ र यसमा गतिशिलता आउँछ । हस्तमैथुनको माध्यमले तपाई पुरानो स्पर्मलाई नयाँ स्पर्मले बदल्छ, जुन फर्टिलिटीको लागि राम्रो हुन्छ ।
२-तनावबाट मुक्ति दिलाउँछ
हस्तमैथुन तनाव कम गर्न र उत्तेजना उत्पन्न गर्नका लागि सबैभन्दा राम्रो तरिका हुन्छ । हस्तमैथुनबाट डोपामाइन र अक्सिटोसिन नामक हर्मोन्स उत्पन्न हुन्छ, जसको कारण तपाई भित्र उत्साह उत्पन्न हुन्छ ।
३-यौन संक्रमण हुने आशंका हुँदैन
हस्तमैथुनको सबैभन्दा ठूलो फाइदा हुन्छ कि यसबाट एसिडिटी वा अन्य कयौँ यौन संक्रमणको रोगहरू हुँदैन । यो उत्तेजना महसूस गर्नुको सबैभन्दा राम्रो र सुरक्षित तरिका हुन्छ ।
४-प्रोस्टेट क्यान्सरको आशंका कम हुन्छ
एक रिसर्चका अनुसार, जो पुरुष सप्ताहमा पाँच पटक स्खलित हुन्छन्, यसमा प्रोस्टेट क्यान्सर हुने आशंका कम हुन्छ । यसको कारण यो हुन्छ कि हस्तमैथुन गर्नाले क्यान्सर सेल्स बाहिर निकाल्छ ।
५-प्रीमेच्योर इजेकुलेशनको समस्याबाट आराम
हस्तमैथुनबाट प्रीमेच्योर इजेकुलेशनको समस्याबाट पनि आराम पाउन सकिन्छ । यहाँ सम्म कि सेक्सको अवधिमा इजेकुलेशनमा नकारात्मक रूपले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
मोरङमा निर्माणाधीन भवनको पर्खाल भत्कियो, १ को मृत्यु, ३ जना घाइते